Apple waxay gaari doontaa qiime dhan 3 bilyan oo ay ugu mahadcelineyso baabuurkeeda korontada ku shaqeeya | Waxaan ka socdaa mac
Falanqeeyayaashu waxay raadinayaan hab ay ku arkaan sida iyo goorta ay Apple noqon karto saddexda trillion ee shirkadda. Markii ay u ekayd inay noqonayso sannadkan, falanqeeyayaal badan ayaa ku dhiiraday inay dhahaan taasi suurta gal ma noqon. Hadda waxay heleen Barakadii Quduuska ahayd iyadoo loo mahadcelinayo Apple Car.Waxaa la hadal hayaa suurtagalnimada in sanado yar gudahood aan arki doonno gaariga shirkadda oo ku wareegaya waddooyinka waana xilliga la qiimeyn doono qiimaha. Marka ugu yaraan Falanqeeyayaasha Citigroup iyo Wedbush ayaa sidaas leh.
Falanqeeyayaasha, markan ka socda Citigroup iyo Wedbush waxay saadaalinayaan imaatinka gaariga Apple Waxay ku riixi kartaa suuq geynta Apple inay kudhowaad tahay $ 3 trillion. Waqtigan xaadirka ah Apple waxay u dhigantaa 2,05 trillion dollars, taasi waxay la macno noqon laheyd koror ku dhow 50% marka loo eego qiimihiisa haatan. Dib-u-eegiddani runtii waxay leedahay xeelad yar. Jim Suva oo ah falanqeeyaha Citigroup ayaa sheegay inay ku dari karto ilaa 15% dakhliga iibka wixii ka dambeeya 2024, marka dadka qaar saadaalinayaan inuu imaan doono Apple Car.Kordhinta inteeda kale waxay ka imaan kartaa wax soo saarka Apple ee jira, gaar ahaan iPhone.
Falanqeeyaha Wedbush Daniel Ives ayaa xusay guusha iPhone 12 oo ah caddayn sii socota koritaanka. Markaa gaariga Apple wuxuu qayb wanaagsan ka noqon doonaa koritaankaas. Falanqeeyahaani wuxuu na siinayaa talo: Sicirada saamiyada ee Apple waxay u taagan yihiin fursad iibsi dahabi ah oo loogu talagalay kuwa xiiseynaya. Saamiyada shirkadda Apple ayaa dhowaan hoos u dhacay qiyaastii 15%. Qeyb ka mid ah tan waxay la xiriirtaa walaac ku saabsan sida, sida Bloomberg u dhigay, "waxsoosaarka curaarta ee sii kordhaya ayaa si ballaadhan ugu dhuftay waaxda tiknoolajiyada."
Marka shaki la'aan gaariga Apple wuxuu noqon doonaa kan ka dhigaya inuu gaaro qiimaha saddex bilyan, laakiin kaligiis ma sameyn doono. Waxaan iskudayaa inaan iraahdo falanqeyntan waxay imaaneysaa iyada oo aan dhihi mahadsanidiin Mac-yada leh M1-yada soo jiray iyo kuwa jiri doonaTiradaas shaki la'aan sidoo kale waa la gaari doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay gaari doontaa qiime dhan 3 bilyan oo ay ugu mahadcelineyso baabuurkeeda korontada ku shaqeeya
Adobe ayaa sheeganeysa in Photoshop uu 50% ka shaqeynayo Apple Silicon